Self Ịgbago HGY28 HGY32 - China Qingdao CO-NELE Group
Ekwentị: +86 13963912630
Ekwentị: +86 18306398869
Self rịa HGY28 HGY32
Tụkwasịnụ Ikike: 300 / setịpụrụ kwa ọnwa
Mode nke mbanye: Ofụri Esịt haịdrọlik
ọganihu Structure: 28-3M, 32-3M / 4M
Pipeline n'obosara: 125mm
Mgbe na-eji, ọ na-ancred ka n'ala na initiallly kwadebere oghere. Ọ bụrụ na ọ na-achọrọ bilie, a ụlọ elu kreenu dị mkpa na-ebuli ihe nyefee ọganihu ruo esote elu n'ala n'ihi ịbụ anchored.one oge rịa nwere ike izute chọrọ nke ihe nyefee abụọ ala.
Kọmpat imewe, mfe ọrụ, a pụrụ ịdabere na nchekwa na kwesịrị ekwesị na-ewu ụlọ dị elu
ụdị Ft ofu Self rịa
kwụ-apụghị Iru 28m 32m 32m
elu n'akuku 0-85 Celsius 0-85 Celsius 0-90 Celsius
Ọganihu Open Way 3R 3R 4R
Ọganihu Ogologo (mm) 12000/9100/6200 13960/10600/7430 88800/8000/8001/7840
Nkuku 92 Celsius / 177 Celsius / 180 Celsius / 181 Celsius
Ne dayameta Φ125mm
ibu 18.5t 19.5t 19.6t
na counterweight Ọ dịghị counterweight
mbukota 40HQ 2 40HQ 2 40HQ 2
The arced ọganihu Ọdịdị na kachasị site n'itinye CPU imewe. The ọganihu nakweere elu-ike ígwè efere maka mmepụta na nkà mmụta sayensị na usoro. Ọ na atụmatụ mara mma ile anya, nke ka rigidity na osisi ike, huu magburu onwe na a pụrụ ịdabere àgwà.
B. Hydraulic usoro
G usoro ngwaahịa nakweere ụwa na-ama Germany Rexroth mmanụ mgbapụta, proportional valvụ
(na-arụ ọrụ ahụ) na itule valvụ na abụọ jubiga ókè, mgbe C na E usoro
ngwaahịa nakweere Germany Rexroth solenoid directional akara valvụ na itule valvụ
na abụọ nile. Ọ irè ẹse nwere emebi nke ọganihu
nke nwere ike mere site n'elu ọsọ ije mgbe ọganihu tụlee ala, na mberede
na-abawanye nke mmanụ cylinder si mgbali n'okpuru mpụga agha, si otú ntụkwasị obi nke ọganihu
Ne haịdrọlik mmanụ tank sụgharịa a kọmpat Ọdịdị na free swivel. Ọ na-enye nnukwu
adaba n'ihi na echichi, dismounting na mmezi, nke hụ ogologo ọrụ
ndụ na magburu onwe arụmọrụ.
Dị ka a akụkụ anọ etiti Ọdịdị, na rịa owuwu bụ mgbanwe, a pụrụ ịdabere na na-adaba adaba
n'ihi na dismounting.
E. Slewing usoro na Reducer
Slewing reducer nakweere ngwaahịa mere ụwa ma ama ika nke Italy Comer, na
a oké torsion. Ịbụ so na integrated slewing itule valvụ mere
Germany Hawei, ọ oji ezigbo ọrụ ma a pụrụ ịdabere na na ike arụmọrụ.
F.Wireless Remote njikwa
G usoro ngwaahịa ịmụta ụlọ ọrụ-nanị analogue wireless remote njikwa mere
Germany Hetronic, tinyere proportional valvụ mere Germany Rexroth, ọ na-eme ka ije-eji ire ụtọ, haịdrọlik mmetụta mmachi, na arụmọrụ pụrụ ịdabere na. E wezụga na,
ọ na-eme ka o kwe omume stepless ọsọ ụkpụrụ na multi ọganihu na slewing mmekọrịta, nke enwekwukwa ọrụ arụmọrụ ukwuu.
■ C na E usoro ngwaahịa ịmụta ụlọ ọrụ-nanị analogue wireless remote njikwa mere Taiwan TELECRANE, nke dị mfe na-adaba adaba iji rụọ ọrụ, ukwuu eguzogide
nsogbu na a pụrụ ịdabere na arụmọrụ.
■ ọ bụla usoro na-ebu na-Wired remote njikwa maka ojiji na mkpa.
The electric akara usoro nakweere ụwa ma ama ika nke electric mmiri, dị
ka Japanese Omron na French Schneider. The multi-egbochi a guzobere na
-achịkwa omume, iji zere misoperation na hụ na usoro si pụrụ ịdabere.
Kọlụm ka nke elu-ike ígwè efere na square udi, na mma n'ile anya,
rigidness na osisi ike, nakwa dị ka nnukwu pụrụ ịdabere.
Previous: Anyịnya ihe nyefee ọganihu HGY28
Anyịnya ihe nyefee ọganihu HGY28
Anyịnya ihe nyefee ọganihu
Kwụ HGY17 HGY19
Ekwentị / Whatsapp: +86 13963912630
Ekwentị / Whatsapp: +86 18306398869